Nkọwapụta Ecommerce: Mmetụta nke Ọrịa na mkpọchi COVID-19 na Rlọ Ahịa na Ntanetị | Martech Zone
Mmetụta nke ọrịa a emeela ka ndị mmeri na ndị meriri afọ a. Ọ bụ ezie na a manyere obere ndị na-ere ahịa ka ha mechie ọnụ ụzọ ha, ndị ahịa na-echegbu onwe ha banyere COVID-19 ka a kpaliri ịtụ online ma ọ bụ gaa na nke ha nnukwu igbe ahịa. Ọrịa na-efe efe na njikọ gọọmentị metụtara emeela ka ụlọ ọrụ niile kwụsị, ọ ga-abụ na anyị ga-ahụ nsonaazụ ahụ ọtụtụ afọ na-abịa
Ọrịa a na-efe efe mere ka ndị ahịa na-akpa àgwà. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere obi abụọ ma nọgide na-ala azụ ịme azụmahịa ha n'ịntanetị… mana nchegbu ọ bụla nke ịzụ ahịa n'ịntanetị ngwa ngwa kwụsịrị n'okpuru egwu nke ikpughere COVID-19.
Ọganihu ngwa ngwa nke ecommerce nwere ike ịbụ naanị akụkọ akụkọ 2020 na ọ bụghị na-awụ akpata oyi. Site na oria ojoo coronavirus na eme ka otutu anyi ghara ime ulo, 60% nke mmekọrịta anyị na ụlọ ọrụ dị ugbu a n'ịntanetị. N'ime ụbọchị iri mbụ nke ọnwa Nọvemba naanị, ndị ahịa US emefuolarị $ 21.7 ijeri online - nke ahụ bụ 21% mmụba kwa afọ.
Maura Monaghan, Ecommerce Statistics and Trends for 2020: Mmetụta nke COVID & Nbili nke Teknụzụ Ọhụrụ
Firmlọ ọrụ m na-arụ ọrụ na ndị na-etinye ego na-ahụ mbibi mbụ. Ndị na-ere ahịa bụ ndị lekwasịrị anya n'ahịa ahịa ha na ịnya ụgbọ ala na-ere ahịa na-eweghachi azụ ozugbo na ndị asọmpi ahụ nyere mmuta ecommerce nke mbụ. Ọtụtụ n’ime ha enweghịzi ọrụ.
Obi abụọ adịghị ya na usoro ecommerce emeela ka ahụike dị mma maka azụmaahịa ndị ahụ ma ọ bụ ngwa ngwa ma ọ bụ tinyeworị nnukwu ego na mgbanwe dijitalụ ha.
Ahịa Online na vslọ Ahịa Site na Industrylọ Ọrụ
Ahụike na Mma a na-ebu amụma ịbịaru ntanetị site na 23% vs -8.2% in-store.
Consumer Electronics a na-ebu amụma ịbịaru ntanetị site na 28% vs -26.3% in-store.
Ejiji a na-ebu amụma ịbịaru ntanetị site na 19% vs -33.7% in-store.
Ngwongwo ulo a na-ebu amụma ịbịaru ntanetị site na 16% vs -15.2% in-store.
Ecommerce ahịa ndị doro anya na ịrị elu tupu coronavirus mere ka ha rịa afọ a, ma ugbu a, ọdịnihu bụ maa dijitalụ. Enweghị nkwupụta doro anya ihe anyị nwere ike ịtụ anya mgbe ọrịa coronavirus gbasasịrị, ma ọ bụ mgbe ụbọchị ahụ ga - abịa - mana ọnụ ọgụgụ ecommerce sitere na mbụ na n'oge ntiwapụ COVID-19 na - egosi na ịzụ ahịa n'ịntanetị bụ ebe uche anyị kwesịrị ịdị ka anyị na-anwa ile anya n'ihu .
a ozi sitere na WebsiteBuilderExpert na-akọwapụta mmetụta nke ahịa ecommerce n'oge Ọrịa Coronavirus, ihe na-enweghị isi mere ka ọtụtụ ịzụrụ, otu ndị ahịa si eme atụmatụ ịzụ ahịa ọrịa na-efe efe, esemokwu mpaghara na omume ndị ahịa, mmetụta nke ngwaọrụ, yana otu esi eji teknụzụ ọhụụ na-emetụta ịzụrụ ihe n'ịntanetị omume.
Enwekwara ụfọdụ nkọwa banyere otu ndị ahịa United States na UK si zụọ ahịa maka Black Friday.
Nkọwapụta Ecommerce na Trends Infographic maka 2020
Tags: nwa ogeCOVID-19cybermondayahia ecommerceọnụ ọgụgụ ecommerceusoro ecommerceFacebookụlọ ọrụ na-ewu ewu ecommerceinfographicmkpọchi mkpọchiahịa ecommerce multichannelịtụ onlineọrịaoria ojooọnụ ọgụgụ mkpọsaụlọ ahịa na ọnụ ọgụgụ ntanetịwebụsaịtịbuilderexpert